Archive du 20200318
Arizaka Rabekoto Raoul Tany Mayotte no nahitana azy farany
Niakatra fitsarana omaly ireo lehilahy efatra voapanga nanampy ny filohan` ny federasiona Malagasy (FMF) ny baolina kitra, Arizaka Rabekoto Raoul, izay nandositra tany Mayotte ny volana febroary lasa teo.
Fanabeazana ara-pifidianana Tsy dia mampiraika ireo antoko politika
Roa volana alohan'ny hanakatonana ny fanavaozana isan-taona ny lisi-pifidianana, ny olom-pirenena afaka mifidy dia tsy mikoropaka ho any amin'ny biraom-pokontany mba hanamarina ny anarany na hisoratra ao anaty lisitra.
Olana sy krizy Izao no tena ilàna ny fampihavanam-pirenena
Mazava ny fanambarana ofisialy nataon’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina omaly sy ny toromarika nomeny ny governemanta ho fisakanana ny mety hidiran’ny Coronavirus eto Madagasikara sy ny fandrindrana ny fiainana ara-tsosialy sy ara-toekaren’ny firenena ihany koa.
Ady amin’ny Coronavirus Nanidy trano i Madagasikara
Nisy ny filankevitry ny minisitra manokana teny amin’ny lapam-panjakana Ambohitsorohitra omaly hariva notarihin’ny Filoham-pirenena niaraka amin'ny Praiminisitra sy Minisitra tompon'andraikitra telo ambin'ny folo ao amin'ny governemanta.
Jean Louis Rakotoamboa « Tsy ampy ny tambazotram-pahasalamana eto ! »
Nanazava ny fahitany ny fiatrehantsika ny fiparitahan’ny valan’aretina Coronavirus eto amin’izao tontolo izao omaly ny mpikaroka momban’ny fanafody eny anivon’ny oniversiten’Antananarivo eny Ankatso, ny Dr Jean Louis Rakotoamboa.
Basket FIBA 3x3 Mpitsara Malagasy mirahalahy afa-panadinana
Navoakan’ny FIBA tany Abidjan Côte d’Ivoire tamin’ny fiandohan’ity herinandro ity ny valin’ny fampifanana mpitsara basikety FEBA 3x3 andiany faha-25 ka nahitana kandida 5 afaka tamin’ny “tests” natao.
Ligin’ny Atletisma any Bongolava Hetsika Rodobe no hanokafana ny taom-pilalaovana vaovao
Taorianan’ny tany Atsimo Andrefana tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo dia anjaran’ny Ligin’ny Atletisma any Atsimo Andefana indry izao no hikarakara ny Rodobe andiany faha-24 araka ny filamatra
Telma Coupe de Madagascar 2020 Vokatra vitsivitsy ihany no azo hatramin’izao
Vokatra vitsivitsy ihany no azo hatramin’izao teo amin’ny fifaninanana Telma Coupe de Madagascar “2è Tour Préliminaire” notontosaina tany amin’ny kianja maro manerana ny nosy tamin’ny alahady 15 martsa 2020 lasa teo ka izany dia
Hambo-po diso toerana
Todihana ny lasa hakana lesona sy hahafahana mibanjina ny ho avy. Andeha hiverenenana kely ary ny tantara satria mbola tsy tara angamba isika raha mahatsiahy, fa kihon-dàlana ho an’ny firenena ny datin’ny 17 martsa 2009, izay feno 11 taona katroka omaly.
Coronavirus Ny “Favipiravir” no mahasitrana azy ?
Tsy honohono fa tena izy.Nahavita ny fikarohana sy andrana rehetra momba ny fanafody iray antsoina hoe Favipiravir sy Sinoa.Ary hita izy io fa mahomby
Famokarana sy fanondranana heladrano Nihoaran’i Madagasikara i Inde, saingy…
Ny firenena indiana no matanjaka indrindra amin’ny lalam-pihariana heladrano. Ny vokatra mivoaka avy amin’io dia ampiasaina hanaovana “produits cosmétiques”.
Entana ilaina andavanandro Manana tahiry enim-bolana i Madagasikara
Nisy omaly ny fivoriana niraisan’ny teo anivon’ny Minisiteran’ny indostria sy ny avy amin’ny Minisiteran’ny varotra sy ny asa tànana manoloana ny famatsiana ny entana ilaina amin’ny andavanandro na ny PPN eto Madagasikara.
Vidim-bary eny an-tsena 200 Ar isaky ny kg ny fiakarany, ny fanararaotana no betsaka
Tena mampitaraina ny isan-tokantrano ny fiakaran’ny vidim-bary eny an-tsena, indrindra nanomboka tamin’ity herinandro ity.
Antsiranana Ifampitadiavana ny rano fisotro madio
Misedra olana amin’ny famatsiana rano fisotro madio ny mponin’Antsiranana nanomboka afak’omaly.
NOVEGASY Hanomezan-danja ireo horonan-tsary mihetsika Malagasy
Tsy afa-misaraka amin’ny kolontsaina Malagasy ny tantara hoy ny ministry serasera sy ny Kolontsaina Rtoa Andriantongarivo Lalatiana, omaly tetsy amin’ny Canal Olympia.
Fitateram-bahoaka Hisy taksibe hiasa amin’ny alina, 2.000 Ar ny saran-dalana
Betsaka ireo olona mitaraina amin’ny tsy fisian’ny taksibe eto an-drenivohitra sy ny manodidina intsony raha vao migadona ny amin’ny 06 ora hariva.
Mpisehatra ara-tsosialy Hivondrona anatina holafitra
Marary ny firenena ho an’ireo mpisehatra ara-tsosialy na ny travailleurs sociales eto amintsika.
Mpitondra afrikanina Mety mba hampandroso ny hopitaliny amin’izay
Patsa iray tsy homby vava, araka ny fomba fiteny Malagasy, ity fahatongavan’ny areti-mandringana Coronavirus ity.
Fisorohana ny fiparitahan’ny « coronavirus » Malagasy 1 amin’ny 4 no afaka manasa tanana ara-dalàna
Olona 1 amin’ny 4 ihany eto amintsika no manana fitaovana ahafahana misasa tanana amin’ny rano sy ny savony, araka ny antontan’isa MICS nivoaka farany. Eran-tany kosa dia ny 40%-n’ny mponina, izany hoe : olona manodidina ny 3 miliara, no tsy manana izany fitaovana izany.
Polisim-pirenena Malagasy Notolorana boky momba ny fehezan-dalàna famaizana
Nanome boky ho an’ny Polisim-pirenena mikasika ny fahezan-dalàna famaizana na « Code Pénal » sy « Procédure Pénal » ny vondrona misahana ny zon' olombelona eo anivon’ny firenena mikambana.